Topnepalnews.com | संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकै दिन गर्न छलफल सुरु
Posted on: August 05, 2017 | views: 296
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै दिन गर्ने विकल्पबारे छलफल सुरु गरेको छ ।
अहिलेसम्म तीनवटा विकल्प देखिएका छन्, त्यसमाथि आयोगले छलफल गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोगका पदाधिकारीलाई प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै दिन कति सम्भव छ भनेर सोधेपछि आयोग विकल्पको खोजीमा लागेको हो । छलफल अहिले प्रारम्भिक चरणमै रहेको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनका लागि एउटै मतपत्र बनाउन सकिने छलफलमा छ । त्यसो हुँदा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि एउटा र समानुुपातिकतर्फका लागि अर्को मतपत्र हुनेछ । मतदाताले दुईवटा मतपत्रमा मतदान गरे पुग्छ । तर, यो विधि अपनाउँदा प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र प्रदेशका दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र अटाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले यस विषयमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोगले दुवै निर्वाचन एकै दिन गर्न तेस्रो विकल्पमा विद्युतीय मतदान उपकरणको उपयोगलाई लिएको छ । सुगम क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान उपकरण उपयोग गरेर बाँकी क्षेत्रमा मतपत्रकै प्रयोग गर्न सकिन्छ । ‘विद्युुुतीय मतदान उपकरणको प्रयोग पनि एउटा विकल्प हो, तर समय र खरिद प्रक्रियाका कारण तत्काललाई भरपर्दो भइसकेको छैन,’ निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले भनिन् ।
चार मतपत्र हुँदाका चार जटिलता
१. मतपत्र छपाइमा समस्या
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै दिन गरे पनि चारवटा मतपत्र हुँदा आयोगलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन हुनेछ । मतदातालाई मतदान गर्न झन्झट हुनुका साथै मतगणनाको व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुनेछ । आयोगका अनुसार एक करोड ६० लाख मतपत्र छाप्न कम्तीमा २० दिन लाग्छ ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैका लागि फरक–फरक मतपत्र छाप्ने हो भने तीन करोड २० लाख मतपत्र छाप्न ४० दिन लाग्छ । साथै, ढुवानीका लागि कम्तीमा २० दिन लाग्नेछ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मतपत्र छाप्न सकिनेछैन । पूर्वानुमानका भरमा मतपत्र छाप्दा अरू जटिलता हुनेछ ।
२. मतपेटिका अपुग
आयोगसँग अहिले करिब ८० हजार मतपेटिका छन्, ती अपुग हुनेछन् । १८ हजार ५७३ मतदान केन्द्र छन् । आयोगका अनुसार प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै दिन गर्ने र चारवटा मतपत्र प्रयोग गर्ने हो भने दोब्बर संख्यामा मतपेटिका आवश्यक हुन्छ ।
३. जनशक्ति अभाव
एकैपटक चारवटा मतपत्रमा मतदान गर्नेगरी निर्वाचन गर्न आयोगलाई कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको अभाव हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक लाखभन्दा बढी कर्मचारी खटिएका थिए । नेपाल प्रहरी, सशस्त्रबाहेक ७५ हजार म्यादी प्रहरी पनि थिए । आयुक्त शर्माका अनुसार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सबै दोब्बरभन्दा बढी संख्यामा आवश्यक पर्छ ।
४. समयको चाप
निर्वाचनको तयारीका लागि समयको चाप हुनेछ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिरभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन तयार गरिनसकेकाले अझै केही समय लाग्नेछ । साथै, निर्वाचन मिति तय नभएकाले मतदाता शिक्षादेखि प्राविधिक तयारीमा समय लाग्नेछ । -नयाँ पत्रिका दैनिक